Home Somali News Somalia: Ciidamadda AMISOM oo ay dhaqaale xumo lasoo daristay!
Bilowgii sanadkan ayaa waxaa hakad weyn ku yimid qorshihii ciidamada AMISOM ee kooxda Al Shabaab looga saarayey deegaano badan oo kamid ah koonfurta Soomaaliya.
Ciidamada AMISOM ayaa hakiyey duulaankii loogu magacdaray “Indian Ocean” ee lagu doonayey in Al Shabaab looga saaro gobalada, Shabeelada Hoose, Gedo iyo Jubada Dhexe.
Caqabada ugu weyn ee AMISOM heysato ayaa lagu sheegay mid dhaqaale kadib markii hoos u dhaceen dhaqaalihii ay wadamada reer Galbeedka ku bixin jireen hawlgalada ciidamada Midowga Afrika.
Hoose u dhaca deeqda dhaqaale ee AMISOM ka heli jireen Beesha Caalamka iyadoo loo marsiin jiray Qaramada Midoobay ayaa ah mid salka ku heyso laba arrimood sida ay Horseed Media u xaqiijiyeen xubno xog-ogaal ah.
Dhaqaale xumada ka jirta Midowga Yurub oo bixin jiray qeybta ugu weyn taageerada Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM
Dhaliilo loo hayo dowlada Federaalka Soomaaliya oo ku guuleysan weyday balan-qaadyo ah dib u dhiska ciidamada Soomaaliya iyo dhanka maareynta Maaliyada.
Hoose u dhaca dhaqaalaha lasiin jiray Soomaaliya ee dhanka Amniga oo si toos ah usoo gaari jirtay ciidamada AMISOM ayaa keentay in gebi ahaan uu joogsado duulaankii ka dhanka ahaa Al Shabaab.
Ciidamada Midowga Afrika ayaa xataa gaaray heer ay dayactir u waayaan qaar kamid ah gaadiidkooda dagaalka ee ku sugaan deegaano kamid ah gobalka Shabeelada Hoose.
Dalka Ugandha oo ah dalka ugu ciidan badan AMISOM ayaan helin qorshe uu ku codsaday in lagu taageero diyaaradaha dagaalka, qorshahaasi oo aan taageero ka helin dalalka deeq bixiyayaasha ah.
Horey ayuu dalka Ugandha u codsaday in lasiiyo magdhaw diyaarado uga soo dhacay Buurta Mount Kenya, diyaaradahaasi oo kusii jeeday Soomaaliya, ayaan weli wax magdhaw ah laga siin wadankaasi.
Madaxweyne Yuweri Musefeni ee dalka Ugandha ayaa sanadkii lasoo dhaafay diiday qorshe sanadka 2015-2016 ciidamo dheeraad ah loogu dirayo ciidamada AMISOM, isagoo ku xiray in sare loo qaado dhaqaalaha lasiiyo ciidamadiisa.
Qaramada Midoobay ayaa ku xalisay arrintaasi in ciidamada Booliiska ee illaaliya xarumaha UN-ka laga keeno dalka Ugandha kuwaasi oo dhaqaale gaar ah lasiinayo, balse ciidamadii AMISOM ayaan weli helin dhaqaale ku filan oo ay ku dhameystiraan hawlgalkii qabashada dhulka Al Shabaab maamusho.
Dhaqaale xumada lasoo daristay AMISOM ayaa u sahli karta in al Shabaab fursado u hesho inay sameyso dhaq dhaqaaq militari oo ay ku cadaadinayaan ciidamada AMISOM ee ku sugan gobalka Shabeelada Hoose.
Weerarkii todobadkii hore ka dhacay deegaanka Leego iyo ka bixitaankii ciidamada AMISOM ee deegaankaasi ayaa guul u ahayd Al Shabaab.
Al Shabaab vs ISIS
Kooxda Al Shabaab ayaa lafteedu dhibaatooyin heystaan dhanka dhaqaalaha iyo waliba khilaaf la sheegay inuu ku dhexjiro hogaanka kooxdaasi.
Al Shabaab ayey saameyn weyn ku yeelatay murran dhanka qadiyada ah oo salka ku haya maleeshiyaad badan oo doonaya inay ku biiraan Daacish halka hogaanka Al Shabaab doonayo inuu kasii mid ahaado Al Qacida.
Murrankaasi ayaa keenay in maleeshiyaad u badan ajaanib ay hada ku xiran yihiin xabsiyada Al Shabaab.
Madaxweynaha Soomaaliya Xassan Shiikh Maxamuud iyo Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xassan ayaa si wadajir ah dhawaan codsi u diray dowlada Itoobiya kaga dalbadeen in ciidamada Itoobiya kabaan goobaha aysan gaari karin ciidamada AMISOM ee ka socda Ugandha iyo Burundi.
Sidoo kale Maamulka Juballand ayaa isaguna wax laga weydiiyey codsiga loo diray dalka Itoobiya.
Inkastoo dowlada Itoobiya codsigaasi aqbashay ayaan hadana la ogeyn in Itoobiya ay kusii nagaan doonto goobaha ay ciidamadeeda hada joogaan.
Dowlada Kenya ayaa hada culeys dhanka gudaha ka saaran la filayaa inay xooga saarto amaanka dalkeeda, iyadoo aysan hada jirin wax ciidamo dheeraad ah oo ay ku kabi doonto kuwa hada ka jooga gobalka Jubbada Hoose iyo magaalada Kismaayo.
Warar ay qorayaan qaar kamid ah saxaafadda dalkaasi Kenya ayaa sheegaya in dowlada ay ka fiirsaneyso in dib ay ciidamadeeda kala soo baxdo dalka Soomaaliya, walow Madaxda dalkaasi ay sheegeen inay sii joogi doonaan ciidamadooda inta amniga laga sugayo.